Hello Nepal News » दोस्रोपटक मेस्सीको करिअरमा उस्तै कथा, उस्तै नियति !
दोस्रोपटक मेस्सीको करिअरमा उस्तै कथा, उस्तै नियति !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका प्रमुख खेलाडी तथा कप्तान लिओनल मेस्सीले हिजो (शुक्रबार) क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिए । चर्चित खेल संस्था ‘गोल’सँग कुरा गर्दै मेस्सीले आफ्नो निर्णय बदलेर बार्सिलोनामै थप एक सिजन करिअर निरन्तरता दिने घोषणा सार्वजनिक रूपमा गरे । एक साताअघि मेस्सीले ब्युरोफ्याक्समार्फत् क्लब छाड्ने निर्णय क्लबलाई पठाएका थिए ।
तर, मेस्सीले अनुरोध गरेजसरी उनलाई बार्सिलोनाले फ्री ट्रान्सफरमा क्लब छाड्न नदिने अडान लियो । र, मेस्सीलाई नबेच्ने पनि अडान लिँदा मेस्सी समस्यामा परेका थिए । मेस्सीले अपेक्षा गरेका थिए कि, आफूले भनेपछि क्लबले आफ्नो बाँकी रहेको एक वर्षको सम्झौता खारेज गरिदिन्छ । र, आफूलाई सजिलैसित फ्री ट्रान्सफमा जान दिन्छ । किनभने, हरेक सिजनको अन्त्यपछि मेस्सीले चाहेमा निःशुल्क क्लब छाड्न पाउँछन् । तर, त्यसो भएन ।
मेस्सीले चाहेजसरी फ्री ट्रान्सफरमा क्लब छाड्न नपाउनु, मेस्सीलाई बार्सिलोनाले नबेच्ने अडान लिनु, उनलाई लैजाने भनिएको क्लब म्यानचेस्टर सिटीले ७०० मिलियन रिलिज क्लब तिर्न नसक्नु अनि मेस्सीले आफूले मुद्दा लडेर भए पनि क्लब छाड्न पाउने बाटो रहे पनि बार्सिलोनाविरुद्ध मुद्दा हाल्न मन नलागेपछि अन्ततः मेस्सी पछि हटे ।
मेस्सीको यो निर्णयबाट बार्सिलोनाका घरेलु समर्थक र खास गरी मेस्सीका समर्थक खुसी भएका छन् । किनभने, बार्सिलोना र मेस्सीका फ्यानको ठूलो हिस्सा उनले बार्सिलोनाबाटै सन्यास लिउन् भन्ने चाहन्छन् । वा, धेरैभन्दा धेरै वर्ष बार्सिलोनाबाटै खेलून् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो चाहना राख्ने फ्यानहरूका लागि मेस्सीको यो निर्णय खुसीकै कुरा थियो ।
तर, मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न बहानमा फेरि निर्णय फिर्ता नलिउन् भन्ने पक्षमा रहेका फ्यानका लागि भने यो नमिठो कुरा बन्यो । किभने, मेस्सीजस्ता महान् खेलाडीले क्लब छाड्ने निर्णय गरेर पुनः फिर्ता लिनु अपरिपक्वता हो । र, यसलाई विषय बनाएर आलोचकहरूले उनको नैतिकतामाथि प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । क्लब छाड्ने निर्णय एक साता पनि टिक्न नसक्दा मेस्सी निर्णय लिने र बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छैनन् भन्नेहरूलाई अर्को राम्रो मसला बनिदियो । भयो पनि त्यस्तै ।
किनभने, मेस्सीले निर्णय गरेर फिर्ता लिएको यो नै पहिलोपटक होइन । सन् २०१६ मा पनि उनले करिअको एक ठूलो निर्णय गरेर पछि फिर्ता लिएका थिए । त्यसबेला अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा चिलीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएपछि मेस्सीले राष्ट्रिय टोलीबाट अप्रत्यासित रूपमा सन्यास नै घोषणा गरेका थिए । सो खेलमा मेस्सीले पेनाल्टी गुमाएपछि अर्जेन्टिनाले लगातार दोस्रोपटक चिलीसँग पेनाल्टीमा फाइनल हारेको थियो ।
सो खेलपछि आँसुमा डुबेका मेस्सीले हारको पिडा सहन नसकेर दुनियाँ आश्चार्यमा पर्ने गरी सन्यास नै घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसको केही महिनापछि उनले पुनः सन्यास फिर्ता लिए । र, टोलीमा फर्किए । त्यसबेला मेस्सीले हतारमा निर्णय गरेर पछि फिर्ता लिएको भन्दै चर्कै आलोचना भएको थियो । तर, मेस्सी सधैं मौन रहे । कारण, उनीसँग जवाफ थिएन । उनी निरीह थिए ।
ठीक त्यसरी नै यसपटक मेस्सीले २० वर्षदेखि बस्दै आएको क्लब बार्सिलोना छाड्ने निर्णय गरे । तर, उनको निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन । यो वा त्यो बहानामा उनले आफ्नो निर्णय बदले । र, पुनः बार्सिलोनामै बस्न तयार भए । यसपटक च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम आठमा जर्मन क्लब बार्यन म्युनिखले ८–२ को बेइज्जतीपूर्ण हार खुवाएपछि हारको पीडा सहन नसकेर मेस्सीले क्लब छाड्ने मनस्थिति बनाएको उनी स्वयंले स्वीकारेका छन् । उनले बार्यनसँगको हारलाई आफूले क्लब छाड्ने निर्णय लिनुका केही प्रमुख कारणमध्ये एक मानेका छन् ।
यसरी मात्रै चार वर्षको बीचमा मेस्सीले आफ्नो करिअरका सबैभन्दा दुई ठूला निर्णय गरे । सन् २०१६ मा अर्जेन्टिनाबाट कोपा हारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाटै सन्यास घोषणा गरे । र, पछि फिर्ता लिए । त्यसको ४ वर्षपछि २०२० मा बार्सिलोनाबाट लगातार पाँचौंपटक च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएपछि उनले क्लब नै छाड्ने निर्णय गरे । तर, एक सातापछि उनले निर्णय फिर्ता लिए ।
मेस्सीले यस्ता कठिन निर्णय लिनुका पछि थुप्रै कारण होलान् । र, फिर्ता लिनुका पछि पनि थुप्रै कारण छन् । उनका यस्ता निर्णयले विश्वभरका करोडौं फ्यानलाई खुसी नै दिएका छन् । किनभने, उनले नखेल्ने सन्यास लिएर खेल्ने निर्णय गरे अनि २० वर्ष बसेको क्लब छाड्ने निर्णय गरेर फेरि नछाड्ने निर्णय गर । यी दुवै निर्णय खास गरी उनका व्यक्तिगत फ्यानदेखि आ–आफ्नो टिमका लागि पनि राम्रा निर्णय थिए ।
आलोचना गर्ने र कमजोरी पर्खेर बस्नेहरूले मेस्सीका यी दुवै निर्णयको चर्को विरोध गर्न थालिसकेका छन् । उनलाई मजाकमा उडाउन थालिसकेका छन् । तर, उमेरले ३३ वर्ष पुगेका मेस्सीका यी निर्णयले केही हजार आलोचकलाई मसाला दिए पनि करोडौं फ्यानलाई भने खुसी नै दिएको छ । पक्कै पनि, २० वर्ष बसेको क्लब छाडेर अन्तिम समयमा अन्यत्र जानुभन्दा त्यहीं रहेर सोही ठाउँबाट सन्यास लिनु धेरै सुन्दर र मिठो कुरा हुन्छ । यस्ता नमूना खेलाडी थोरै मात्र हुन्छन् । दुई–दुईपटक विश्वलाई चकित पार्ने गरी करिअरकै ठूला निर्णय गरेर फेरि निर्णय फिर्ता लिने मेस्सीले हिजो उठेका र अब उठ्ने नैतिक प्रश्नहको जवाफ उनैले देलान् । तर, उनको यो निर्णयले ठूलो संख्याका पुटबलप्रेमीमा पनि खुसी नै फर्काएको छ ।
तत्काललाई बार्सिलोनामै रहने निर्णय गरेका मेस्सीले अब बार्सिलोनाबाटै सन्यास लिन्छन् ? वा, बाँकी रहेको आफ्नो एक वर्षको समझौता सकेर म्यानचेस्टर सिटी वा अन्य क्लब जालान् ? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला ।
प्रकाशित मिति २० भाद्र २०७७, शनिबार १४:४५